I-Rocky Top Guesthouse esemfuleni - I-Airbnb
I-Rocky Top Guesthouse esemfuleni
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Ted
U-Ted Ungumbungazi ovelele
Qedela ukuhlala kwakho ngokubuka okuhle komfula i-Mississippi usuka kule ndlu yezihambi yangasese ehlezi phezulu ku-bluff. Itholakala kuphela kumamayela ayi-1.2 ukusuka edolobheni laseHannibal lomlando lapho kukhona izindawo zokudlela nezitolo, izindawo ezikhangayo izivakashi namapaki.
UKULUNGISWA kuka-2020 kufaka phakathi ukususwa kwephephadonga elidala nophahla lwe-popcorn nopende omusha egumbini lokuhlala, ekhishini nasendlini yokugezela okunikeza indlu ukubukeka okusha. I-guesthouse isanda kuhlotshiswa. 870 amamitha-skwele konke kuwe! Ikamelo lokulala linombhede ENTSHA wenkosi kanye nefeni elicwebezelayo ku-dresser. Kukhona nombhede wendlovukazi endaweni yokuhlala. Ikhethini langasese lisendaweni elinganikeza ukuhlukana okuthile negumbi lokuhlala. Kunezitebhisi eziholela emnyango wale ndlu ukusuka endaweni yokupaka izimoto. Kukhona umpheme omkhulu onetafula le-patio nezihlalo. Kukhona nebhentshi okuhlalwa kulo ukuze ubuke izikebhe nezikebhe zasemfuleni zidlula.
I-propane gas grill isiyatholakala ukuze ugrile ngaphandle.
4.99 · 274 okushiwo abanye
Lena indawo eseceleni eduze komgwaqo onguthelawayeka wesifundazwe. Kunomakhelwane oyedwa kuphela emgwaqeni wethu. Nokho, singaphezudlwana kwemayela ukusuka edolobheni lase-Hannibal.
Siyakuthanda ukuhlangana nezivakashi zethu. Abanikazi bahlala kule ndawo endlini ehlukile kodwa siyatholakala ukuze sinambitha iwayini !! Sizokwazi futhi ukufinyeleleka kunoma yiziphi izidingo noma imibuzo engase iphakame.
UTed Ungumbungazi ovelele